ukun Jacayl Daraadii ma Ciidamo Shisheeye ayaa laysu Doonanayaa?
Xukun Jacayl Daraadii ma Ciidamo Shisheeye ayaa laysu Doonanayaa?
Walaal waad mahadsantiin dhamaan baHda allpuntland. Intaa ka waxaa maant oo bishu tahay bishii 7aad sagaalkeedii akhristay warar ay qoreen saxaafadaha afka soomaaliga ku hadla oo ay kaga waramayeen shirka ka dhacay koonfur afrika oo lagaga hadlaayay horumarinta afrika ayaa cabdiqaasim oo marka runta la sheego ah hogaamiye kooxeedka carta uu ku dalbaday ciidamo shisheeya ah oo waliba afrikaan ah in loo diro soomaaliya .
Ciidamadaa oo waliba ay ka amar qaataan isga oo kaliya .hadaba walalayaal dadka afka soomaaliga ku hadloow maxaa u malaynaysaan hadii la cala la keeno soomaaliya ciidamo afrikaan ah oo tira badan.
Waan wada ognahay ciidamada afrika in aanay aqoontooda edaabeed iyo ta cafimaad iyo ta dhaqaale midna aanay wanaagsanayn.
Hadaba waxaan leeyahay hogaamiyaha carta colaada ummadu yaanay heerkaa kula gaadhin. mida labaad hogaamiyaha carta haday daacad ka tahay in hubka laga dhigo dadk haysta waa koonfurta Soomaaliya meesha ugu badan ee hub aan xukumed gacanta ugu jirin uu yaalo .Waxa kale oo cad oo si toos ah loo wada ogyahay inuu cabdi qaasim qaybiiyay 1500 oo qori oo uu kala siiyay raga kala ah
1-daahir dayax 500 oo qori .
2-maleeshiyada isaga taageerta ama ka ag dhaw dhaw 800 oo qori
3-xasan abshir 500 oo qori oo nabada Puntland lagu diminayo.
Hadaba waxaan uga socdaa Cabdiqaasim isgoo intaas oo hub ah qaybiyay inta qarsoona ay badan tahay siduu indha adaygiisa yidhaahdaa hubka Soomaaliya yaala ciidamo urururiya ayaan rabaa, labada arimoodma siday suurto gal u noqonayaan hubaan qaybiyay iyo ciidamo hubka ka dhiga somaliya hala ii iikeeno.
Waa su'aal ummada waxa garadka soomaaliyeed iyo inta nabad jeceli ay ka jawaabi doonaan. Waxaan ku soo gabagabaynayaa xaalada Cabdiqaasim WAAR KURSIGAABAAN CAASHAQAYE MAR QUDHA UUN I DHAHA MADAX WEYNE.
WAA FIKRAD AKHRISTAYAASH AWALE.D.M